Da’ yar iyo IswiidhanActuellement sélectionné
Da' yarta Iswiidhan inta badana waa kuwo wax badan gooni uu taagan. Iskuulka waxaa laguugu baraa in aad dalaceeyaan. Da' yarta waxeey heeystan waxbarasho lacag la'an ah, tageero-ardayeed iyo laga yaabaa kaalmo ijaar. Taas mecneheed waa in aad adiga heeysato fursado fiican aa nolosha jid ka doorato. In badan ayaa guriga waqti hore ka guuro, laga yaaba in ee guuran waxbarasho magaalo kale ah.
Waxaa lagaa sugaa in ee gooni uu taagnaato laakin isla markaas waalidkaada, wakiilkaada ama xanaanaha inaad ka maarmi karin ilaa aa 18 sano ka gaarto. Adiga dhalin yare weeyn ah wax badan ayaa ka howl baxeeysaa: lacagta guriga ayaa qorsheeynee, waxbarasho ama shaqo, dar-dhaqaqid, guri-hagaajin, waxaana la xariir la lahaanee hey'addaha dowlada.
Wax yaalahaan waxaad ku toobaraneeysaa in aad dagan tahay guriga, ama deegaan ama deegan reered. Wax yaalaha qarkood iskuulka aa ku baraneeysaa , wax yaalaha qarkood adiga si gooni ah uu raadsaneeysid.
​Isku-xidh ku geeynaayo warbixin ku saabsan guri ka guurid
Hey’adda aruurinta deeymaha warbixinteeda – Guri ka guurid
Warbixinta HSB oo ku saabsan guri ka guurid
Swedbank – Guri ka guurid
Inta badana boggaga degmooyinka waxaad ka heli kartaa liis sheegaayo guriyada degmada banaan iyo cida kireeyneeyso.
Isku-xidh ku geeynaayo boggaga degmada Guriyaha-Ardayda